Qarax sababay dhaawac oo ka dhacay huteel ku yeel xaafada Wadajir, Galkacyo. – Radio Daljir
Qarax sababay dhaawac oo ka dhacay huteel ku yeel xaafada Wadajir, Galkacyo.
Wacaal Daray ah: Galkacyo, Nov 09 – Waxaa daqiiqado ka hor ka dhacay huteel ku yaal xaafada Wadajir ee magaalada Galkacyo qarax inta la og yahay sababay dhaawaca 6 qof oo rayad ah. Huteelka ayaa waxaa ku degay maanta wafti uu hogaaminayo wasiiru-dawlaha arrimaha gudaha ee dawlada federaalka ah ee Somaliya Md. C/rashiid M. Xidig oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan ciidanka bilayska ee federaalka.
Qunbulad nooca gacanta ah ayaa la sheegay in lagu soo tuuray huteelka ay waftigu ku sugan yihiin.
Ciidanka amniga ee magaalada Galkacyo ayaa isku gadaamay goobta uu qaraxu ka dhacay, isla markaana la sheegay in ay is-rasaaseeyeen dablay la sheegya in ay mas’uul ka ahaayeen qaraxa.
Waftiga federaalka ayaa ku sugnaa Puntland dhawrkii maalmood ee la soo dhaafay, ujeedada safarakooduna ay ahayd in ay ka qayb galaan munaasabad qalinjabin ah ee ciidamo ku tababartay Kulliyada Tababarka Ciidanka ee Carmo.
5 qof oo ku dhaawacantay bumbaanooyin caawa lagu tuuray hotel ku yaalla xaafadda Wadajir ee magaalada Galkcyo.
Galkacyo, Nov 09 – Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhaawacmay inta la xaqiijiyey labo Bumbo gacgeed oo caawa lagu tuuray goob hotel ah oo ay dad badani ku cawaynayeen, hotelkaasi oo ku yaalla xaafadda Wadajir ee magaalada Galkacyo.
Hotelka qaraxaan lala beegsaday oo lagu magacaabo AMBAS ayaa waxaa degganaa wafti ka socday dawladda federalka KMG ah ee Soomaaliya oo uu hoggaaminayey wasiiru dawlaha wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya C/rashiid Maxamed Xiddig iyo xubno uu ka mid yahay salkaalka ugu sarreeya bileyska dawladda Soomaaliya Gen. Cabdi Xasan Cawaale ?Qaybdiid? iyo xildhibaano baarlamaanka ka tirsan.
Bambaanooyinka oo ahaa nooca gacanta laga tuuro ayaa la sheegay in ay haleeleen bannaanka hore ee hotelka halkaasi oo ay ku sugnaayeen dad shacab ah oo aad u tiro badan, waxaana wararku ay intaasi ku darayaan dadka dhaawacmay in ay iskugu jireen shacab ku dhawaa goobta ay wax ka dhaceen iyo bileys ilaalo ka hayey hotelka waftigu ay degganaayeen.
Dadkii bamkaasi soo tuuray ayaa la tilmaamayaa in baxsadeen, waxaana muddo cabbaara ah goobtaasi laga maqlayey rasaas xooggan oo ay is wardaarsanayeen illaaladii hotelka iyo kooxdii falka ka danbaysay.
Mas?uuliyiin u hadlay maamulka koonfurta gobolka Mudug ayaa sheegay in ay wadaan baaritaanno dheeraad ah oo ay ku ogaanayaan ciddii falkaasi ka danbaysay, waxayna intaasi ku dareen in ay hadda gacanta ku hayaan raadad caddaynaya halkii ay u carareen.
Mas?uuliyiinta dawladda federalka ee caawa la weeraray hotelkii ay degganaayeen ayaa galabta soo gaaray magaalada Galkacyo iyagoo todobaadkii ugu danbeeyey ku sugnaa deegaannada Puntland, waxaana ay shalay ka qayb galeen munaasabad lagu qabtay kuliyadda tababarrada bileyska Soomaaliyeed ee degmada Carmo ee gobolka Bari.